English to Myanmar translator specializing in law
Local time: 01:38 MMT (GMT+6.5)
What Lum Nan Ti is working on
Aug 11, 2019 (posted via Translators without Borders): I finished an ENG to BUR project, first aid, 8638 words for Translators without Borders :) ...more, + 17 other entries »
Total word count: 121933
Words translated: 37,929
English to Burmese - Rates: 0.03 - 0.05 USD per word
Burmese to English - Rates: 0.03 - 0.05 USD per word
Burmese - Rates: 0.03 - 0.05 USD per word
Burmese to English: 1973 General Clauses Law
၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ စကားရပ်များအနက် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရေး ဥပဒေ
[၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ တော်လှန်ရေးကောင်စီဥပဒေ အမှတ် ၂၂။]
အမည်၊ စတင်အာဏာတည်သည့်နေ့ရက်၊ သက်ဆိုင်ခြင်း
၁။ ။ (က) ဤဥပဒေကို ၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ စကားရပ်များ အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရေးဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
(ခ) ဤဥပဒေသည် ချက်ခြင်းအာဏာတည်ရမည်။
၂။ ။ ဤဥပဒေသည် အောက်ဖေါ်ပြပါ ဥပဒေများနှင့် သက်ဆိုင်စေရမည်-
(က) ဤဥပဒေ အာဏာမတည်မီက ဥပဒေပြုအာဏာပိုင် တရပ်ရပ်ကပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အက်ဥပဒေများ၊ ဥပဒေများ၊ တချက်လွှတ်ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းဥပဒေများ၊ အမိန့်များနှင့်ကြေညာချက် များ၊
(ခ) ဤဥပဒေအာဏာတည်ပြီးနောက်တွင် ဥပဒေပြုအာဏာပိုင်တရပ်ရပ်က ပြဋ္ဌာန်းသည့် ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းဥပဒေများ၊ အမိန့်များနှင့် ကြေညာချက်များ။
၃။ ။ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များ၏ အနက်အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုရေးလမ်းညွှန်များသည် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်စေ ရမည်-
(က) ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက် တရပ်ရပ်တွင် ပါဝင်သောစကားရပ်များသည် သာမန်နေ့စဉ်သုံး အနက်အဓိပ္ပါယ် ကိုဆောင်စေရမည်။ သို့ရာတွင် ရှေ့နောက်စကားတို့၏ အဓိပ္ပါယ်နှင့်အညီ သီးခြားအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပေးရန် လိုအပ်သောစကားရပ်သည် ယင်းသီးခြား အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ဆောင်စေရမည်။
(ခ) ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက် တရပ်ရပ်၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ယင်းဥပဒေကိုပြုသည့်အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီအောင် ဖွင့်ဆိုရမည်။
(ဂ) ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက် တရပ်ရပ်၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ဖွင့်ဆိုရာ၌ ယင်းဥပဒေမပြဋ္ဌာန်းမီက ရှိရင်းစွဲ ဖြစ်သော သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများအရ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေကိုလည်းကောင်း၊ ယင်းအခြေ အနေကို မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် မည်သို့မည်ပုံ ပြင်ဆင်ရန် လိုကြောင်းကိုလည်းကောင်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားနိုင်သည်။
(ဃ) အထူးဥပဒေတရပ်ရပ်တွင် ပါရှိသော ပြဋ္ဌာန်းချက်တရပ်သည် ယေဘုယျဥပဒေတရပ်ရပ်တွင် ပါရှိ သောသက်ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ကို လွှမ်းမိုးသည်။ ဥပဒေတရပ်ရပ်တွင် ပါရှိသောအထူးပြဋ္ဌာန်းချက် တရပ် ရပ်သည် ယင်းဥပဒေတွင်ပါရှိသော ယေဘုယျပြဋ္ဌာန်းချက်ကို လွှမ်းမိုးသည်။
(င) ဥပဒေတရပ်ရပ်တွင် နောက်ကြောင်းပြန်၍ အာဏာသက်ရောက်မှုရှိစေရမည်ဟု အတည့်အလင်း ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမရှိလျှင် ယင်းဥပဒေသည်နောက်ကြောင်းပြန် အာဏာသက်ရောက်မှုမရှိစေရ။ သို့ရာတွင် မည်သည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေမျှနောက်ကြောင်းပြန်၍ အာဏာသက်ရောက်မှုမရှိစေရ။
(စ) လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်သာသက်ဆိုင်သော ဥပဒေတွင် တနည်းတဖုံဖော်ပြထားခြင်းမရှိလျှင် ယင်းဥပဒေ သည်နောက်ကြောင်းပြန်၍ အာဏာသက်ရောက်မှုရှိစေရမည်။
(ဆ) ရှေးဦးကျသော ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တရပ်နှင့် နောက်ကျသော ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တရပ်တို့ ကွဲလွဲ ဆန့်ကျင်နေပါက နောက်ကျသော ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်သည် အတည်ဖြစ်စေရမည်။
၄။ ။ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တရပ်ရပ်၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ဖွင့်ဆိုရာ၌ ယင်းဥပဒေကိုမပြဋ္ဌာန်းမီက ဥပဒေ ရေးဆွဲရေးကော်မီရှင်၊ သို့မဟုတ်ဥပဒေပြု အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အချက် မှတ်တမ်း များကိုလည်းကောင်း၊ ရေးဆွဲခဲ့သော ဥပဒေမူကြမ်းများကိုလည်းကောင်း၊ ဥပဒေပြုရခြင်း၏ ကျိုးကြောင်း ဖော်ပြချက်ကိုလည်းကောင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။
၅။ ။ (က) အောက်ပါစကားရပ်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရမည်။
(၁) “မြန်မာ”ဆိုသောစကားရပ်ကို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ သုံးစွဲရာ၌ ယင်းစကားရပ် တွင် ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ဗမာ၊ စသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ ပါဝင်သည်။
(၂) “အခြေခံဥပဒေ”ဆိုသော စကားရပ်သည် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ဆိုသည်။
(၃) “အစိုးရ”ဆိုသော စကားရပ်တွင် ဆိုင်ရာကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အခြေခံဥပဒေဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဥပဒေ တရပ်ရပ်ဖြင့်ဖြစ်စေ နိုင်ငံတော်၏ စီမံခန့်ခွဲမှု အာဏာအပ်နှင်းခြင်းခံရသော အဖွဲ့အစည်းကို ဆိုသည်။
(၄) “ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း”ဆိုသောစကားရပ်သည် မြူနီစီပါယ်ကော်မီတီကိုဖြစ်စေ၊ မြို့ကော်မီတီကို ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေကိုကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်ရန်၊ သို့မဟုတ်စီမံအုပ်ချုပ်ရန် ဥပဒေဖြင့် တာဝန်အပ်နှင်းခြင်းခံရသော၊ သို့မဟုတ် အစိုးရကတာဝန်အပ်နှင်းခြင်းခံရသောအခြား အဖွဲ့အစည်း ကိုဖြစ် စေဆိုသည်။
(၅) “ဥပဒေ”ဆိုသောစကားရပ်တွင် ဤဥပဒေအာဏာမတည်မီကဖြစ်စေ၊ အာဏာတည်ပြီးနောက်ဖြစ်စေ ဥပဒေပြုအာဏာပိုင်တရပ်ရပ်က ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်ဥပဒေ၊ အက်ဥပဒေ၊ တချက်လွှတ်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းဥပဒေ၊ အမိန့်အပြင်ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သော ဓလေ့ထုံးတမ်းများလည်း ပါဝင်သည်။
(၆) “နည်းဥပဒေ”ဆိုသော စကားရပ်တွင် ဥပဒေတရပ်ရပ်ဖြင့် အပ်နှင်းသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို သုံးစွဲ၍ ပြုလုပ်သောနည်းဥပဒေနှင့် ဥပဒေတရပ်ရပ်အရ နည်းဥပဒေအဖြစ်ဖြင့်ပြုသော စည်းမျဉ်းဥပဒေပါဝင်သည်။
(၇) “စည်းကမ်းဥပဒေ”ဆိုသော စကားရပ်သည် ဥပဒေတရပ်ရပ်ဖြင့် အပ်နှင်းသည့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို သုံးစွဲ၍ ပြုလုပ်သော စည်းကမ်းဥပဒေကိုဆိုသည်။
(၈) “အမိန့် ကြော်ငြာစာ” ဆိုသော စကားရပ်သည် ပြန်တမ်းတွင်ပါဝင်သော အမိန့်ကိုဆိုသည်။
(၉) “ပြန်တမ်း” ဆိုသော စကားရပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်းကို ဆိုသည်။
(၁၀) “စတင်အာဏာတည်ခြင်း”ဆိုသောစကားရပ်သည် ဥပဒေစတင်အာဏာတည်သည့်၊ သို့မဟုတ် စတင် အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့ရက်ကို ဆိုသည်။
(၁၁) “နိုင်ငံသား”ဆိုသော စကားရပ်သည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားကို ဆိုသည်။
(၁၂) “နိုင်ငံခြားသား” ဆိုသော စကားရပ်သည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား မဟုတ်သူကို ဆိုသည်။
(၁၃) “တပ်မတော်” ဆိုသော စကားရပ်သည် နိုင်ငံတော်၏ ကြည်းတပ်၊ ရေတပ်နှင့် လေတပ်တို့ကိုဆို သည်။
(၁၄) “တရားရုံး” ဆိုသော စကားရပ်တွင် တရားရုံးအဖွဲ့အစည်း၊ တရားသူကြီးအဖွဲ့၊ တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ အပြင် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော အဖွဲ့တရပ်ရပ်၊ သို့မဟုတ် အာဏာပိုင် တစ်ဦးဦးလည်း ပါဝင်သည်။
(၁၅) “ကျမ်းကျိန်လွှာ” ဆိုသော စကားရပ်တွင် ကတိသစ္စာပြုလွှာ ပါဝင်သည်။
(၁၆) “ကျမ်းသစ္စာပြုခြင်း” ဆိုသော စကားရပ်တွင် ကတိသစ္စာပြုခြင်းပါဝင်သည်။
(၁၇) “လက်မှတ်ရေးထိုးသည်” ဆိုသော စကားရပ်တွင်မိမိအမည်ကို မရေးနိုင်သောသူ တဦးတယောက် က ကြက်ခြေခတ်ခြင်း၊ လက်ဗွေနှိပ်ခြင်း အစရှိသည့်အမှတ်အသားပြုလုပ်ခြင်း ပါဝင်သည်။
(၁၈) “မှတ်ပုံတင်ခြင်း” ဆိုသော စကားရပ်သည် စာတမ်းအမှတ်အသားများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် တည်ဆဲဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဆိုသည်။
(၁၉) “ရေးသားချက်” ဆိုသော စကားရပ်တွင်စာပုံနှိပ်ခြင်း၊ ကျောက်ပုံရေးကူးခြင်း၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း အပြင် အခြားမြင်သာသော ဖေါ်ပြချက်များလည်း ပါဝင်သည်။
(၂၀) ‘မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သည့် ပစ္စည်း” ဆိုသော စကားရပ်တွင် မြေ၊ မြေမှဖြစ်ထွန်းလာသော အကျိုးခံစား ခွင့်များ၊ မြေ၌စိုက်ထူထားသော အရာဝတ္ထုများအပြင် ယင်းအရာဝတ္ထုတို့တွင် အမြဲတပ်ဆင်ထားသည့် အရာဝတ္ထုများလည်း ပါဝင်သည်။
(၂၁) “ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့် ပစ္စည်း” ဆိုသော စကားရပ်တွင် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သည့် ပစ္စည်းမှတပါး အခြား ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး ပါဝင်သည်။
(၂၂) “ပြစ်မှု” ဆိုသော စကားရပ်သည် တည်ဆဲဥပဒေတရပ်ရပ်အရ ပြစ်ဒဏ်ထိုက်သင့်နိုင်သော ပြုလုပ်မှု၊ သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှုကို ဆိုသည်။
(၂၃) “အားပေးကူညီခြင်း”၊ သို့မဟုတ် “အားပေးအားမြှောက်ပြုခြင်း” ဆိုသောစကားရပ်တွင် ပြစ်မှု တစုံတခုကို ကျုးလွန်စေရန် တဦးတယောက်သောသူအား လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ကူညီ ထောက်ပံ့ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ပြစ်မှုတစုံတခုကိုကျုးလွန်ရန် အခြားသူတဦးနှင့်ပူးပေါင်းကြံစည်ခြင်း ပါဝင်သည်။
(၂၄) “တဦးတယောက်သောသူ”၊ “သူတဦး”၊ “ပုဂ္ဂိုလ်” ဆိုသောစကားရပ်တွင် ကုမ္ပဏီ၊ အသင်း၊ အဖွဲ့ အစည်းတခုခု၊ သို့မဟုတ် လူတစုပါဝင်သည်။
(၂၅) “အရွယ်ရောက်သူ”ဆိုသောစကားရပ်သည် အသက် ၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးသူကို ဆိုသည်။
(၂၆) “ဘခင်” ဆိုသော စကားရပ်တွင်ဥပဒေအရ မွေးစားသော ဘခင်လည်းပါဝင်သည်။
(၂၇) “သား” ဆိုသော စကားရပ်တွင် ဥပဒေအရ မွေးစားသော သားလည်းပါဝင်သည်။
(၂၈) “ရက်” ဆိုသော စကားရပ်သည် ညဉ့်သန်းခေါင် အချိန်မှစ၍ ရေတွက်သော နှစ်ဆယ့်လေးနာရီ ကာလ အပိုင်းအခြားကို ဆိုသည်။
(၂၉) “လ” ဆိုသော စကားရပ်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြက္ခဒိန်အရရေတွက်သော လကို ဆိုသည်။
(၃၀) “နှစ်” ဆိုသော စကားရပ်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြက္ခဒိန်အရရေတွက်သော နှစ်ကိုဆိုသည်။
(၃၁) “ရေယာဉ်” ဆိုသော စကားရပ်တွင် ရေကြောင်းသွားလာရာ၍ အသုံးပြုသော ယာဉ်အားလုံး ပါဝင် သည်။
(၃၂) “သင်္ဘော” ဆိုသော စကားရပ်သည် ရွက်နှင့်ဖြစ်စေ၊ စက်ဖြင့်ဖြစ်စေ သွားလာသော ရေယာဉ်အားလုံး ပါဝင်သည်။
(၃၃) “ရေယာဉ်မှူး” ဆိုသော စကားရပ်သည် ရေယာဉ်ကိုအမြဲတန်းဖြစ်စေ၊ အခိုက်အတန့်ဖြစ်စေ ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်ရသူ၊ ဦးစီးရသူ၊ သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းရသူကိုဆိုသည်။သို့ရာတွင် ယင်းစကားရပ်တွင် ရေကြောင်းပြမပါဝင်။
(၃၄) “လေယာဉ်” ဆိုသော စကားရပ်တွင် လေကြောင်းသွားလာရာ၌ အသုံးပြုသော ယာဉ်အားလုံး ပါဝင် သည်။
(၃၅) “လေယာဉ်မှူး” ဆိုသော စကားရပ်သည် လေယာဉ်ကိုအမြဲတန်းဖြစ်စေ၊ အခိုက်အတန့်ဖြစ်စေ ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်ရသူ၊ သို့မဟုတ် ဦးစီးရသူကို ဆိုသည်။
(၃၆) “သေတမ်းစာ” ဆိုသော စကားရပ်သည် ရေးသားသူသေဆုံးပြီးသည့်နောက် ယင်း၏ဆန္ဒအတိုင်း ပစ္စည်းများကို စီမံခန့်ခွဲစေရန် ညွှန်ကြားခဲ့သော စာတမ်းအမှတ်အသားကို ဆိုသည်။
(ခ) အထက်ဖော်ပြပါ အနက်အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်တို့သည် စကားရပ်များပါရှိသော ဥပဒေတွင် အခြား နည်းဖော်ပြထားခြင်း၊ သို့မဟုတ် ရှေ့နောက်စကားဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိသရွေ့သာ အကျိုးသက်ရောက် စေရ မည်။
၆။ ။ ဥပဒေတရပ်ရပ်တွင် အခြားနည်းဖော်ပြထားခြင်း မရှိလျှင်-
(က) ယောက်ျားကို ရည်ညွှန်းသော စကားရပ်သည် မိန်းမနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်ဟုမှတ်ယူရမည်။
(ခ) ဧကဝုစ် အဓိပ္ပါယ်ရှိသည့် စကားရပ်သည် ဗဟုဝုစ်အဓိပ္ပါယ်ရှိသည့်စကားရပ်နှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည်။ ဗဟုဝုစ် အဓိပ္ပါယ်ရှိသည့် စကားရပ်သည် ဧကဝုစ် အဓိပ္ပါယ်ရှိသည့် စကားရပ်နှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၇။ ။ ဥပဒေတရပ်ရပ်တွင် ကာလအပိုင်းအခြားနှင့်စပ်လျဉ်း၍-
(က) “မှ”၊ သို့မဟုတ် “မှစ၍” ဟူသောစကားရပ်ကိုသုံးနှုန်းထားလျှင် ဖော်ပြသည့်ရက်၊ သို့မဟုတ် ဖော်ပြ သည့်ကာလအပိုင်းအခြား ပါဝင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(ခ) “အထိ” ဟူသောစကားရပ်ကို သုံးနှုန်းထားလျှင် ဖော်ပြသည့်ရက်၊ သို့မဟုတ် ဖော်ပြသည့် ကာလ အပိုင်းအခြား ပါဝင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၈။ ။ တဦးတယောက်သောသူ၏ အသက်ကိုတွက်ချက်ရာတွင် ယင်းကိုမည်သည့်အချိန်၌ပင် မွေးသည် ဖြစ်စေ၊ မွေးနေ့ကို တနေ့ဟုသတ်မှတ်ကာ ထည့်သွင်းရေတွက်ရမည်။ မွေးနေ့၏ တနှစ်ပတ်လည်သောနေ့သို့ ကူးဝင်သည်နှင့်တပြိုင်နက် အသက်တနှစ်ပြည့်သည်ဟု သတ်မှတ်ရမည်။
၉။ ။ မှုခင်းကိစ္စတခုခုကို ရုံးတခုခု၌ နေ့တနေ့တွင် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန် ဥပဒေတရပ်ရပ်က ပြဋ္ဌာန်းထား ရာ၌ အဆိုပါနေ့သည် ရုံးပိတ်ရက်နေ့ဖြစ်လျှင် ထိုမှုခင်းကိစ္စကို ထိုရုံးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့တွင် ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်သော် ယင်းမှုခင်းကိစ္စကို သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွင်း ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သည်ဟု မှတ်ယူ ရမည်။
ခြွင်းချက်။ ။ ဤပုဒ်မပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်သည် “ကာလစည်းကမ်းသတ် ဥပဒေ”တွင် အကျုံးဝင်သော မှုခင်း ကိစ္စနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။
၁၀။ ။ ဥပဒေတရပ်ရပ်အရ အကြောင်းကြားစာ၊ ဆင့်စာ၊ ပေးစာတခုခုကို စာပို့တိုက်မှတဆင့် ပို့ခွင့်ပြုသည့် အခါ ထိုစာကိုမှန်ကန်စွာ လိပ်တပ်ပြီးနောက် စာပို့တိုက်ကမှတ်ပုံတင် ပြုလုပ်၍ပို့ခြင်းသည် ယင်းသို့ ပို့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ထိုသို့ပို့ခြင်း မဟုတ်ကြောင်း သက်သေထင်ရှားအောင် မပြနိုင်လျှင်ထိုစာကို စာပို့တိုက်က သာမန်အားဖြင့် ဝေငှပေးအပ်သင့်သည့် အချိန်တွင် ပို့ပြီးဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၁၁။ ။ အကွာအဝေးကို တိုင်းတာရာ၌ ရေညီပြင်ပေါ်တွင် မျဉ်းဖြောင့်အတိုင်း တိုင်းတာရမည်။ သို့ရာတွင် ဥပဒေတရပ်ရပ်၌ အခြားနည်းပြဋ္ဌာန်းထားလျှင် ယင်းသို့ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် နည်းအရသာ တိုင်းတာရမည်။
ဥပဒေထုတ်ပြန်ခြင်း၊ အာဏာတည်ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း
၁၂။ ။ ဥပဒေတရပ်ရပ်၌ အခြားနည်းပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမရှိပါက ယင်းဥပဒေသည် နိုင်ငံတော်တဝန်းလုံးတွင် အာဏာတည်ရမည်။
၁၃။ ။ (က) ဥပဒေတိုင်းကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌက လက်မှတ်ရေးထိုး ရမည်။ ယင်းကိုပြန်တမ်းတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာရမည်။
(ခ) ဥပဒေတရပ်ရပ်တွင် ယင်းဥပဒေအာဏာတည်သည့်နေ့ရက်ကို အတည့်အလင်း သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိလျှင် ယင်းဥပဒေသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာသည့်နေ့ရက် တွင် စတင်အာဏာတည်ရမည်။
(ဂ) ဥပဒေတရပ်ရပ်တွင် မည်သည့်နေ့ရက်မှစ၍ အာဏာတည်စေရမည်ဟု ဖော်ပြထားလျှင် ယင်းဥပဒေ သည် စတင်အာဏာတည်ရမည့်နေ့သို့ ကူးသည်နှင့်တပြိုင်နက် အာဏာတည်စေရမည်။
၁၄။ ။ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက် တရပ်ရပ်ကို အခြားဥပဒေ တရပ်ရပ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းလျှင် ယင်းသို့ ရုပ်သိမ်းခြင်း မပြုမီက-
(က) ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရသော ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်၏ အာဏာသက်ရောက်ခဲ့ခြင်းကို မထိခိုက်စေရ။ ထို့ပြင် ယင်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်အရ နည်းလမ်းတကျ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်တို့ကို မထိခိုက်စေရ။
(ခ) ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရသော ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ရရှိခဲ့သည့်ရပိုင်ခွင့်၊ သို့မဟုတ် အခွင့်အရေးကို လည်းကောင်း၊ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည့်တာဝန်နှင့် ကျခံခဲ့ရသည့် ကြွေးမြီတို့ကိုလည်းကောင်း မထိခိုက် စေရ။
(ဂ) ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရသော ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ခံခဲ့ရသော ပြစ်ဒဏ်နှင့် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် ပစ္စည်း သိမ်းယူခံရခြင်းတို့ကို မထိခိုက်စေရ။
(ဃ) အထက်ကဆိုခဲ့သော ရပိုင်ခွင့်၊ သို့မဟုတ် အခွင့်အရေး၊ သို့မဟုတ် တာဝန်၊ သို့မဟုတ် ကြွေးမြီ၊ သို့မဟုတ် ပြစ်ဒဏ်၊ သို့မဟုတ် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် ပစ္စည်းသိမ်းယူခံရခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသော စုံစမ်း စစ်ဆေးမှု၊ မှုခင်း၊ တရားစွဲဆိုလျှေက်ထားနိုင်ခွင့်တို့ကို မထိခိုက်စေရ။ ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရသော ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း ချက်သည် အတည်ဖြစ်နေသေးဘိသကဲ့သို့ ဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်သည့်ပြင်၊ ယင်းဥပဒေအရ၊ ပြစ်ဒဏ်ပေး ခြင်း၊ ပြည့်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းယူခြင်းတို့ကို ဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ခြွင်းချက်။ ။ ရုပ်သိမ်းခြင်းပြုသော ဥပဒေ၌ တနည်းတဖုံ ဖော်ပြထားလျှင် ယင်းသို့ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်းသာ ဖြစ်စေရမည်။
၁၅။ ။ ဥပဒေတရပ်ရပ်ကို အခြားဥပဒေတရပ်ရပ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းပြီးသည့်နောက်ယင်းသို့ ရုပ်သိမ်းခြင်း ပြု သော ဥပဒေကိုတဖန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြန်လျှင် ရုပ်သိမ်းခြင်းခံခဲ့ရသော မူလဥပဒေသည်ပြန်လည်၍ အာဏာ မတည်စေရ။သို့ရာတွင်နောက်ဆုံးပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည့် ရုပ်သိမ်းခြင်းပြုသော ဥပဒေတွင် တနည်းတဖုံဖော်ပြ ထားလျှင် ယင်းသို့ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသာ ဖြစ်စေရမည်။
၁၆။ ။ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက် တရပ်ရပ်ကို အခြားဥပဒေတရပ်ရပ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းပြီးသည့်နောက်၊ ရုပ်သိမ်း ခြင်းခံရသော ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ကို အစားထိုးသည့် အနေဖြင့်ဥပဒေအသစ်တရပ် ပြဋ္ဌာန်းသည့်အခါ မည်သည့် ဥပဒေ၊ သို့မဟုတ် စာချုပ်စာတမ်းတွင်မဆို ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရသော မူလဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ရည်ညွှန်း ခြင်းသည်၊ အဆိုပါဥပဒေသစ်ကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူရမည်။
အာဏာမတည်သေးသောဥပဒေနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၁၇။ ။ (က) ဥပဒေတရပ်ရပ်ကို ပြဋ္ဌာန်းထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်သော်လည်း၊ ယင်းဥပဒေသည် ချက်ချင်းအာဏာ မတည် သေးလျှင် ယင်းဥပဒေအရပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့် စည်းကမ်း ဥပဒေများကို ကြိုတင်၍ထုတ်ပြန်ထားနိုင်သည်။
(ခ) ယင်းသို့အာဏာမတည်သေးသည့် ဥပဒေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါကိစ္စများနှင့်သက်ဆိုင်သော အမိန့် များကို ကြိုတင်၍ထုတ်ပြန်ထားနိုင်သည်-
(၂) ယင်းဥပဒေအရ တရားရုံးနှင့် အခြားရုံးများ ဖွဲ့စည်းခြင်းကိစ္စ၊
(၃) ယင်းဥပဒေအရ တာဝန်ယူရသောအဖွဲ့အစည်း ခန့်ထားသည့်ကိစ္စ၊
(၄) အကြီးအကဲ၊ တာဝန်ထမ်းဆောင်သူ၊ ဝန်ထမ်းတို့ကိုခန့်ထားသည့်ကိစ္စ၊
(၅) ယင်းဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသောကိစ္စ၊
(၆) ယင်းဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်ရသည့် အဖွဲ့အစည်း၊ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်နေရာတွင် မည်သည့်နည်းလမ်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်ဟူသောကိစ္စ၊
(၇) မည်သည့်အခကြေးငွေပေးရမည်ဟူသော ကိစ္စ။
(ဂ) ယင်းသို့ထုတ်ပြန်သော နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းဥပဒေ၊ စည်းကမ်းဥပဒေ၊ သို့မဟုတ် အမိန့်သည် ယင်းဥပဒေစတင် အာဏာမတည်သေးသမျှ ကာလပတ်လုံးအကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိစေရ။
နည်းဥပဒေစသည်တို့ပြုလုပ်ခြင်း၊ အနက်အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုခြင်း
၁၈။ ။ ဥပဒေတရပ်ရပ်အရ နည်းဥပဒေကိုဖြစ်စေ၊ စည်းမျဉ်းဥပဒေကိုဖြစ်စေ၊ စည်းကမ်းဥပဒေကိုဖြစ်စေ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာကိုဖြစ်စေ၊ အမိန့်ကိုဖြစ်စေထုတ်ပြန်နိုင်ခွင့်ရှိလျှင် ယင်းနည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းဥပဒေ၊ စည်းကမ်းဥပဒေ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ သို့မဟုတ် အမိန့်ကိုဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းလည်းပြုနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၁၉။ ။ ဥပဒေတရပ်ရပ်အရ ထုတ်ပြန်သော နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းဥပဒေ၊ စည်းကမ်းဥပဒေ၊ အမိန့် ကြော်ငြာစာနှင့် အမိန့်တခုခု၌ ပါရှိသော စကားရပ်များ၏အဓိပ္ပါယ်သည် ယင်းဥပဒေတွင် အနက်အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုသည့်အတိုင်း ဖြစ်စေရမည်။ သို့ရာတွင် အခြားနည်းအဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုရမည်ဟု ဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းလျှင် ယင်းသို့ပြဋ္ဌာန်းသည့်အတိုင်း ဖြစ်စေရမည်။
၂၀။ ။ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တရပ်ကို ရုပ်သိမ်းပြီးနောက် ယင်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ပါ ကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက် အသစ်တရပ် ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည့်အခါ အဆိုပါ ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရသော ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း ချက်အရ ပြုလုပ်ခဲ့သော နည်းဥပဒေ၊ စည်မျဉ်းဥပဒေ၊ စည်းကမ်းဥပဒေ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာနှင့်တကွ ရာထူးခန့်ထားမှုအသီးသီးသည် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်အသစ်နှင့် မဆန့်ကျင်သမျှ ဆက်လက်အာဏာ တည်စေ ရမည်။
၂၁။ ။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးတို့၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် ဥပဒေတရပ်ရပ်အရ ချမှတ်သည့်ငွေဒဏ်အားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်စေရမည်။ သို့ရာတွင် ယင်းသို့မသက်ဆိုင်စေရဟု ထိုဥပဒေတွင် အတည့်အလင်း ပြဋ္ဌာန်းထားလျှင် ပြဋ္ဌာန်းသည့်အတိုင်းဖြစ်စေရမည်။
၂၂။ ။ ပြုလုပ်မှု၊ သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှု တခုခုသည် ဥပဒေနှစ်ရပ်၊ သို့မဟုတ် နှစ်ရပ်ထက်ပိုသော ဥပဒေများ အရ ပြစ်မှုမြောက်လျှင် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို ယင်းဥပဒေများအနက် ဥပဒေတရပ်ရပ်ဖြင့်သာ တရားစွဲဆို အပြစ်ပေးရမည်။ပြစ်မှုတရပ်တည်းအတွက် ပြစ်ဒဏ်တကြိမ်ထက်ပို၍ မခံစေရ။
တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း၊ ဆက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရပ်စဲခြင်း
၂၃။ ။ တာဝန်တခုခုကို ပေးအပ်ရာ၌ ပုဂ္ဂိုလ်အမည်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ရာထူးအလျောက်ဖြစ်စေ ပေးအပ်နိုင်သည်။ ယင်းသို့ပေးအပ်ရာ၌ ခေတ္တသော်လည်းကောင်း၊ အမြဲတမ်းသော်လည်းကောင်း ပေးအပ်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် တာဝန်ပေးအပ်ခွင့်ပြုသော ဥပဒေ၌ တနည်းတဖုံဖော်ပြထားလျှင် ယင်းသို့ ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသာ ဖြစ်စေရမည်။
၂၄။ ။ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တရပ်ရပ်သည် တာဝန်တခုခုကို ထမ်းဆောင်နေသူနှင့် သက်ဆိုင်ကြောင်း ပါရှိ လျှင် ယင်းတာဝန်ကို အခိုက်အတန့်အားဖြင့်ထမ်းဆောင်နေသူနှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၂၅။ ။ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက် တရပ်ရပ်သည် အဖွဲ့အစည်းတခုခု၊ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်နှင့် သက်ဆိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားလျှင် ထိုအဖွဲ့အစည်း၊ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်၏ဆက်ခံသူနှင့်လည်း သက်ဆိုင် သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၂၆။ ။ ဥပဒေတရပ်ရပ်အရ သူတဦးကို ရာထူးတခုခုတွင် ခန့်ထားနိုင်ခွင့်ရှိသော အာဏာပိုင်သည် ထိုသို့ခန့်ထားသောသူကို ရာထူးမှရပ်စဲခြင်း၊ သို့မဟုတ် ထုတ်ပယ်ခြင်းလည်း ပြုနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ထိုဥပဒေ၌ ယင်းကဲ့သို့မဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားလျှင် ယင်းသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့် မရှိစေရ။
၂၇။ ။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ တော်လှန်ရေးကောင်စီသည် ဥပဒေများ၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို တညီ တညွတ်တည်းဖြစ်စေရန် ဖွင့်ဆိုပေးရမည်။
၂၈။ ။ (က) ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအာဏာ စတင်တည်သည့်နေ့၌ ယင်းအခြေခံဥပဒေတွင် ပါရှိသော စကားရပ်များဖြင့့်် ရှိရင်းစွဲဥပဒေများတွင် ပါရှိသော သက်ဆိုင်ရာစကားရပ်များကို ဆီလျော်အောင် အစားထိုးပြီး ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(ခ) ဥပဒေတရပ်ရပ်တွင် ပါရှိသော စကားရပ်တခုခုကို အခြေခံဥပဒေတွင်ပါရှိသော မည်သည့်စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးပြောင်းလဲကြောင်းကို အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာရမည်။
၂၉။ ။ မြန်မာနိုင်ငံယေဘုယျ စကားရပ်များ အက်ဥပဒေ (The Burma General Clauses Act) ကို ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
1973 Revolutionary Council of the Union of Myanmar
[1973, Revolutionary Council of the Union of Myanmar, Law Number 22]
Name, date on which the law enters into force and relevancy
Section 1. (a) This law shall be called the 1973 the General Clauses Law.
(b) This law shall enter into force immediately.
Section 2- This law shall apply to the following laws-
(a)	Acts, laws, ordinances, rules, by-laws, orders and notifications passed by an legislative authority before the law has come into force.
(b)	Laws, rules, by-laws, orders and notifications passed by any legislative authority after this law has enacted into force.
Guide to the Definitions
Section- 3. The guides to the definitions of the provisions of the law shall be as follows;-
(a)	The terms included in any of the provisions shall have the meaning of normal daily usage. However, the term which needs to define separately in accordance with the meaning of the terms covering all aspects shall have such separate meaning.
(b)	The meaning of any provision of the law shall be defined in consistent with the aim of the authority who passed that law.
(c)	In defining the meaning of any provision of the law, can consider the situation occurring according to the existing respective laws before that law has been enacted in what manner and how, that condition needs to be changed.
(d)	A provision contained in any special law influences the respective provisions contained in any general law. Any special provision contained in any law influences the general provision contained in that law.
(e)	If it is not expressly provided in any law to have retrospective effect, that law shall not have retrospective effect.
(f)	If it is not described in any other manner inalaw which is only related to the procedure that law shall not have retrospective effect.
(g)	If there is contrary in any old provision and in any late provision, the late provision of the law shall be in force.
Section -4, in defining the meaning of any of the provision of the law can consider minutes discussed at the drafting law commission or legislative authority before that law is enacted or the draft laws or description of the reason of making this law.
(a) The following terms shall be defined as follows.
(1)	“Myanmar”, in using this term with regard to the national races, shall include, Kachin, Kayah, Karen, Chin, Mon, Rakhine (Arakan), Shan and Burmese.
(2)	“Constitutional Law”, shall mean the Constitutional Law of the Union of Myanmar.
(3)	“Government”, shall mean, with regard to the respective matter, the organization where the executive power of the State is assigned with the constitutional law or any law.
(4)	“Regional organization”, shall mean the Municipal committee or City committee or any other organization which is assigned duty by the government or which is assigned by the law to govern or manage the regional fund
(5)	“law”, shall include, act, mandate, rule, by-law, order and customs which are in force like law passed by legislative authority before or after this law entered into force.
(6)	“rule”, shall include, rule which is made by using the authority assigned by any law and by-law which is made as rule by any laws.
(7)	“by-law”, shall mean, by-laws which is made by using the authority assigned by any law.
(8)	“notification”, shall mean, the order included in the Gazette.
(9)	“Gazette”, shall mean Gazette of the Union of Myanmar.
(10)	“comes into force”, shall mean the date on which the law begins to enter into force or begin to have effect.
(11)	“citizen”, shall mean, the citizen of the Union of Myanmar.
(12)	“alien”, shall mean, the person who is not the citizen of the Union of Myanmar.
(13)	“military”, shall mean, military, naval and air forces of the State.
(14)	“court”, shall include, association of courts and judges and judicial body including any authority or any organization which has jurisdictional power.
(15)	“affidavit”, shall include,asolemn affirmation.
(16)	“making oath”, shall include, making oath.
(17)	“sign”, shall include, making mark whereaperson who is unable to write his own name does the cross or fingerprint.
(18)	“register”, shall mean, registering the documents according to the existing law.
(19)	“writing”, shall include, printing, lithography, photography including the description which can be seen by the public.
(20)	“immoveable property”, shall include, land, benefits to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth.
(21)	“moveable property”, shall include, property of every description, except immoveable property.
(22)	“offense”, shall mean, any act or omission made punishable by any law for the time being in force.
(23)	“abetment”, shall include, investigatingaperson to commit an offense or assisting or conspiring with another person to commit an offense.
(24)	“someone”, “a person”, “person”, shall include, company or association or body of individual, whether incorporated or not.
(25)	“adult”, shall mean, the person who is over 18 years old.
(26)	“father”, shall include, the father adopted according to the law.
(27)	“son”, shall include, the son adopted according to the law.
(28)	“date”, shall mean, the period of 24 hours counted by midnight.
(29)	“month”, shall mean, month counted according to the International Calendar.
(30)	“year”, shall mean, year counted according to the International Calendar.
(31)	“vessel”, shall include, all vessels which are used in voyage.
(32)	“ship, shall include, all vessels which go by sailing or machine.
(33)	“captain”, shall mean,aperson who supervises, leads or manages the vessel permanently or temporarily. But the navigator is not included in this term.
(34)	“airplane”, shall include, every airplane which is used in aviation.
(35)	“pilot”, shall mean,aperson who supervises or administers the airplane permanently or temporary.
(36)	“will”, shall mean, any testamentary document.
(b)	The above definition shall have effect as long as there is no contrary or as long as it is not described in any other manner in the law which includes terms.
Section-6, if it is not described in any other manner in any law,
(a)	The term referring to man shall also apply to women,
(b)	The term which has the singular meaning shall apply to the term which has plural meaning. The term which has plural meaning shall be assumed to apply to the term with singular meaning.
Section-7, (a) if the term “from” or “since” is used, it shall be assumed to include the described period or date.
(b)if the term “till” is used, it shall be assumed to include the described date or period.
Section-8 In calculating the age ofaperson, despite of being born at any time, the birthdate shall be counted asaday. As soon as it turns to one year round, it shall be regarded to gain the age of one year.
Section-9, When it is provided inalaw to performacase atacourt, if that day is the holiday and if they conduct that case on the day where the court re-opens, it shall be presumed to conduct that case during the specified time.
Exception – the provision in this section shall not apply to the case included in “Limitation Act”.
Section 10- Whenanotice or summons letter or letter is granted to send through the post office, after that letter is correctly addressed, the post office sends it after registering shall be presumed to be sent as such. If they can’t prove that it is not sent as such, it shall be presumed to have sent at the time when the post office normally delivers that letter.
Section-11- In measuring the distance, it shall be measured horizontally in straight. However, if any other manners are provided in any law, it shall be presumed inamanner provided as such.
Promulgation, enforcing and repeal of Law
Section 12- if it is not described in any other way in any law, that law shall be in force in every part of the State.
Section 13(a)- Every law shall be signed by the Chairman of the Revolutionary Council of the Union of Myanmar.
(b)If the date on which that law shall enter into force is not expressly prescribed in any law, that law shall begin to enter into force on the date that the Chairman of the Revolutionary Council of the Union of Myanmar promulgated.
(c)if the date from which it shall be in force is described in any law, that law shall come into force as soon as it changes to the date that law shall enter into force.
Section-14, if any provision of the law is repealed by any other law, before repealing as such-
(a)	Shall not affect the enforcement of the repealed provision of the law. And it shall not affect the act done systematically according to the law
(b)	It shall not affect the title or right gained or the debt incurred under the provision of the repealed law.
(c)	It shall not affect the punishment or forfeiture imposed by the provision of the repealed law.
(d)	It shall not affect the rights to suit or investigation or prosecution regarding the above mentioned title or right or duty or debt or punishment or forfeiture. They shall continue the punishment and forfeiture under that law as the provision of the repealed law is in force.
Exception – if it is described in any other manner in the repealed law, it shall be as provided in as such.
Section 15- afteralaw is repealed by another law, and if the repealed law is again repealed, the primary repealed law shall not enter into force again. However, if it is described in any other manner in the repeal law, it shall be described in as such.
Section-16, after any provision of the law is repealed by another law, and when the new law is provided so as to substitute the provision of the repealed law, referring the primary repealed law in any law or document shall be presumed to referring that new law.
Authorities regarding the law which are still not in force
Section-17(a) even afteralaw has enacted and if that law hasn’t immediately enters into force, rules, by-laws, and principles which are authorized to do under that law shall be issued in advance.
(b)regarding the law which has not entered into force as such, the respective orders shall be promulgated in advance for the following matters-
(1) matter relating to that law
(2) matter of forming the courts and other offices according to that law
(3) matter of assigning responsible organization according to that law
(4) matter of assigning the responsible staff and supervisor
(5) matter to perform according to that law
(6) matter to perform when, where and in what manner that responsible organization or person that has to perform according to that law
(7) matter to give what fee
(8) rule, by-law, principle or order promulgated as such shall not have affect as long as that law enters into force
Making rules and defining
Section 18- if ---- have the right to promulgate rules, by-law, principle, notification or order according to the law, --- shall have the right to supplement, revise, alter or abolish that rule, by-law, principle, notification or order.
Section 19- the meaning of the term is included in any of the rule, by-law, principle, notification or order according to the law shall be the same as it is defined in that law. However, if it is provided in that law to define in any other manner, it shall be as provided in as such.
Section 20- afteraprovision of the law is repealed, whenanew provision of the law with regard to matters included in that provision of the law, it shall continue to be in force as long as the rule, by-law, principle, notification and assigning the title/position according to the repealed provision of the law is not contrary to the new provision of the law.
Section 21- The provision of the Penal Code and Criminal procedure code shall apply to all fine imposed by any law. However, if it is expressly provided not to apply to as such, it shall be as provided in as such.
Section 22- if an act or omission is amount to crime according to two laws or more than two laws, the offender shall be prosecuted and punished with only one of those laws. He shall not be punished more than once for an offense.
Assigning Duty, succession, termination
Section-23, in assigningaduty, it shall be assigned by the name or title/position of the person. In assigning as such, it shall be assigned temporary or permanently. However, if it is described in any other manner in the law assigning the duty, it shall be as it described in as such.
Section-24, if it is included to be related to the person who is in service inaprovision of the law, it shall be presumed to relate to the person who is in service temporarily or permanently.
Section-25, ifaprovision of the law describes to be related to an organization oraperson, it shall be presumed to relate to the successor of that organization or person.
Section-26, The authority who can assignapersonaposition according to any law can terminate or exclude that assigned person from position. However, if it is described as not being able to do as such in that law, he shall not conduct as such.
Section-27, The Revolutionary Council of the Union of Myanmar shall define the meaning of laws to be in conformity.
Section-28,(a) it shall be presumed to have properly substituted the respective terms in the existing law on the date when the constitution of the Socialist Republic of the Union of Myanmar entered into force.
(b)any term included in any law substituted by the term included in the constitutional law shall be promulgated with notification.
Section 29- The Burma General Clauses Act is repealed by this law.
Translation education Bachelor's degree - Yadanabon University
Keywords: criminal law, legal translation, interpretation, proofreading, copy writing, transcribing, legal aid, contracts, handbooks, pamphlets, computer, email, official letter,